Maria, "kofehy" mampiray ilay Virjiny Masina sy ny vehivavy rehetra. | Rosarium
Documentation - Malg ►
Publications - Malg ►
EdR international - Malg
Documentation - Malg
Publications - Malg
Maria, "kofehy" mampiray ilay Virjiny Masina sy ny vehivavy rehetra.
Laharana faha 380 MD 238 oktobra 2013
Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria
Ny filazan’ny Anjely tamin’i Maria no lakilen’ny tantaram-pamonjetsika.Satria tsy tamin’ny fomba “majika” no nahaterarahin’i Kristy na dia mifono mistery sy fahagagana aza izany.
Tany Guadeloupe, Lourdes, Fatima, Medjugorie, Melen, Anosivolakely, ireo toerana eran-tany nisehoan’i Masina Maria dia nisy zava-mahagaga tsy takatry ny saina ary tsy eken’ ny saintsika matetika. Fa ny tena anton’ny fisehoan’i Masina Maria dia ny hitondra fiadanana. Io fiadanana io no manamarika izay rehetra lazain’i Maria sy ataony .Izany no anambarany amintsika ny fepetra hazahoana ny fiadanana.
Eo amin’ny fanaovana ny sary masina ‘ikaona’ dia ny loko mena amin’ny ambaratongany rehetra sy ny manga no ampiasaina amin’ny fitafian’i Masina Maria. Ny mena dia mariky ny kofehy mampiray ny Virjiny Masina sy ny vehivavy rehetra. Ny loko manga kosa milaza ny alahelo, ny fahoriana sy ny fisaonana.
Amin’ ity taona ity ny lohahevitra iraisan’ny Ekipan’ny Rôzery hoe: “Lalina sy mahagaga ny ataon’Andriamanitra ho antsika” no kofehy mampiray antsika. Amin’ izao volana anajantsika an’i Masina Maria Mpanjakavavin’ny Rôzery izao, atambaro amin’ireo marary sy ireo mpanao fivahinianana masina any Lourdes ny fivavahantsika mba hahitan’ izy ireo ny fahasitrananin’ny fo.